Aurora Borealis ee Danmark | Safarka Absolut
La Nalalka Waqooyiga ee Danmark waa muuqaal dabiici ah oo soo jiita kumanaan soo booqda sanad kasta. Nalalka midabada cajiibka ah ee cirka isku shareeraya ayaa la mid ah oo laga arki karo wadamada kale ee Scandinavia sida Norway, Sweden ama Finland. Si kastaba ha noqotee, dad badani waxay aaminsan yihiin in nalalka lagu arki karo cirka deenishka ay si gaar ah u qurux badan yihiin.
Si kastaba ha noqotee, yaabkan lama arko maalin kasta. Nalalka Waqooyiga ee Danmark waa kuwo la arki karo oo keliya waqti cayiman oo sanadka ah xitaa maalin kasta, maadaama muuqaalkoodu ku xidhan yahay. Haddii aad nasiib u yeelatid inaad u safartid Denmark oo aad ku raaxeysan karto yaabkan, waxaad qaadan doontaa aragti aanad iloobi doonin.
1 Waa maxay Nalalka Waqooyiga?
2 Goorma ayaa la arkaa Nalalka Waqooyiga ee Danmark?
3 Meelaha lagu ilaaliyo Nalalka Waqooyiga ee Danmark
4 Sida loo sawiro Nalalka Waqooyiga
Waa maxay Nalalka Waqooyiga?
Aurora borealis (sidoo kale loo yaqaan polar aurora) waa dhacdo u gaar ah jawiga hawada oo iskeed isu muujisa dhalaal ama iftiin iftiin samada habeenkii ah. Qeybta koonfureed waxaa loo yaqaanaa koonfurta aurora.
Waqtiyadii hore waxaa la aaminsanaa in nalalkan cirka ee dahsoon ay leeyihiin asal rabbaani ah. Shiinaha dhexdiisa, tusaale ahaan, waxaa loo yiqiinay "masduulaagii cirka." Kaliya qarnigii toddoba iyo tobnaad wuxuu bilaabay inuu ku barto ifafaalaha aragtida cilmiyaysan. Waxaan eraygan hadda jira "aurora borealis" ku leenahay cirbixiyeenkii Faransiiska Pierre Gassendi. Qarni ka dib, kii ugu horreeyay ee isku xira ifafaalaha iyo soojiidashada dhulka wuxuu ahaa Ingiriiska Edmund halley (waa isla kii xisaabiyay wareegga meeriska Halley).
Nalalka Waqooyiga ee Danmark
Maanta waxaan ognahay in Nalalka Waqooyiga ay dhacaan markii diidmo laga helo walxaha qorraxda lagu soo oogay ay isku dhacaan magnetosphere of the Earth, nooc gaashaan ah oo ku meersan meeraha qaab qaab magnetic ah oo ka yimaad labada tiir. Isku dhaca u dhexeeya walxaha gaaska leh ee hawada ku jira iyadoo ay jiraan qaybo ka soo baxa falaadhaha qorraxda ayaa sababa iyaga inay sii daayaan tamar ayna soo saaraan iftiin. Tani waxay abuurtaa hooska firfircoon ee cagaaran, casaan, buluug iyo guduud ah cirka ku dheel "Shilkan" wuxuu ka dhacayaa dherer u dhexeeya 100 ilaa 500 kiilomitir oo ka sarreeya dhulka dushiisa.
Goorma ayaa la arkaa Nalalka Waqooyiga ee Danmark?
In kasta oo ay dhacaan sanadka oo dhan, Nalalka Waqooyiga ayaa kaliya la arki karaa waqtiyada qaarkood. Waqtiga ugu fiican ee lagu arko Nalalka Waqooyiga ee Danmark waa inta udhaxeysa bilaha Abril iyo September. Inta lagu jiro xilligan sanadka, xagaaga xagaaga waqooyi, habeennadu way sii madow yihiin, cirkuna waa daruuro yar yahay.
Gabbaldhaca iyo qorrax dhaca kadib waa markay nalalkan sixirka ahi bilaabaan inay soo baxaan. Nalalka Waqooyiga (oo ay u yaqaanaan Danmark) nordlys) ka yaabiso shisheeyaha, gaar ahaan kuwa ka yimaada wiishka kale ee aan horay u arag ifafaalahaas.
Nasiib darrose, maalmaha duufaanta ama markay Isniinta tahay, waa wax aan macquul ahayn in markhaati laga dhigo sixirka nalalka woqooyiga. Haddii duufaan dhacdo, ma awoodi doontid inaad aragto Nalalka Waqooyiga maadaama cirka uu aad u dhalaalayo oo midabkiisu si sax ah ugu muuqan karo isha aadanaha.
In xiga video-ga waqtigiisa, lagu duubay Limfjord Sannadka 2019, waad qaddarin kartaa xoogga buuxa ee muuqaalkan dabiiciga ah:
Meelaha lagu ilaaliyo Nalalka Waqooyiga ee Danmark
Waa kuwan qaar ka mid ah meelaha ugu wanaagsan ee lagu arko Nalalka Waqooyiga ee Danmark:
Jasiiradaha Faroe. Jasiiraddan oo ku taal inta u dhexeysa Waqooyiga Atlantik iyo Badweynta Noorway, si dhib yar kuma jiraan wasakhda iftiinka, taas oo dammaanad ka qaadaysa cirka oo cad oo hufan si looga fikiro Nalalka Woqooyi dhammaantiis.
Grenen Waa jasiirad yar oo ku taal woqooyiga darafka weyn ee Danmark. Marka laga soo tago latitude-ka, waxa meeshan ka dhigaya goob indha indheyn wanaagsan waa maqnaanshaha iftiinka macmalka ah ee degsiimooyinka dadka.
Kjul Strand, xeeb dheer oo ku taal duleedka magaalada Hirshals, halkaasoo ay ka baxaan doonyo fara badan oo taga Norway.
Samso, jasiirad ku taal galbeedka Kobanheegan oo caan ku ah jawiga dabiiciga ee aadka loo ilaaliyo. Waa mid ka mid ah kuwa ugu fiican meelaha dabiiciga ah ee Danmark.
Sida loo sawiro Nalalka Waqooyiga
Ku dhowaad qof kasta oo markhaati ka ah aurora borealis ee Danmark wuxuu isku dayaa inuu ku soo qabto quruxda dhacdada kamaradaha sawirrada leh ama kamaradaha fiidiyowga ah, oo weligiis sixirkiisa qabsanaya.
Si sawirka si sax ah loo diiwaangeliyo, waa lagama maarmaan isticmaal meel dheer oo gaadhista. Si kale haddii loo dhigo, muraayadaha kaameeradu waxay u baahan yihiin inay sii furnaadaan wakhti dheer (10 ilbidhiqsi ama ka badan), sidaas awgeedna iftiin badan ha loo sii daayo.
Sidoo kale waa muhiim isticmaal safar si loo hubiyo xasilloonida kamaradda inta lagu jiro muddada soo-gaadhista.
In kasta oo ay jiraan wax kasta, iyo si kasta oo ay u fiican yihiin dhammaan fiidiyowyadaas iyo sawirradu, haddana waxba looma barbar dhigi karo dareenka ah in la ilaaliyo nalalka cirfiidka leh ee nalalka woqooyi ee dhex wareegaya cirka, madaxeenna. Khibrad u qalanta in lagu raaxeysto ugu yaraan hal mar noloshaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Aurora Borealis ee Danmark